iska horimaad khsaaro geystay oo Ciidamada dowlada iyo kuwa kenya ku dhaxmaray Ceel-waaq | Wakaaladda Wararka Hiilnews
iska horimaad khsaaro geystay oo Ciidamada dowlada iyo kuwa kenya ku dhaxmaray Ceel-waaq
Jimco, jan 12 ,2018(HNN) iska horimaadka dhexeya Ciidamada dowlada iyo kuwa kenya oo ka soo gudbay xadka degmada Ceel waaq ee gobolka Gedo ayaa ku dhaxmaray degmadaasi kadib markii labad ciidan ay kala shikiyeen.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan wajiga u duubnaa ay ku hubeysnaayeen saddex ka mid ah gaadiidka dagaalka, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in gaarigooda uu ka babanayay calanka Al-Shabaab.
Ciidamada Dowladda ayaa muujiay shaki ku aadan in Ciidankan ay yihiin Al-Shabaab, waxayna u yeerteen askarta kale oo xiligaas guryohooda ku maqnaa iyagoo soo buux dhaafiyay halka laga baxo Magaalada, si ay isaga caabiyaan Ciidankan hadey yihiin Shabaab.
Ciidamada Kenya oo iyaga dhankooda qabay cabsi ku aadan iney dhexda ugalaan Shabaab ayaa markii ay arkeen Ciidanka Dowladda oo wada u fadhiya rasaas ooda uga, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo geystay Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Ugu dambeyntii Wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalka uu ku dhintay Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Yuusuf (Ilka Case).